दसैंमा कस्ता बिरामीले के खाने, के नखाने ? – Rajdhani Daily
बिहिवार १२ बैशाख, २०७६ (Thursday, 25th April 2019)
१२ बैशाख, २०७६ (25 April 2019)
दसैंमा कस्ता बिरामीले के खाने, के नखाने ?
काठमाडौं । दसैं भन्नेबित्तिकै मासुको परिकार मानिसको मानसपटलमा आउँछन् । यही मासु बिरामी अवस्थामा हुँदा खाएमा त्यसले ज्यान पनि लिन सक्छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. पुकार श्रेष्ठ मासुको परिकार खानेले आफू स्वस्थ्य भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाउँछन् ।
‘रातो मासु, छाला वा त्यसमा हुने बोसोले नसर्ने खालका रोग त बढाइरहेकै हुन्छ भने प्रत्यक्ष सम्बन्धित जनावरमा रहेको रोगसमेत सर्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘अस्वस्थकर मासुका कारण तत्कालै टाइफाइड, झाडापखाला, क्षयरोग, आउँ, पेट फुल्ने, मिर्गौलाको रोग, क्ओसटियल इन्फेक्सन, फुड पोइजनिङ आदि समस्या आउने गर्छन् ।’
अझ दसैंका समय मुटुरोगी तथा उच्च रक्तचापका बिरामीलाई सोझै असर गर्ने रातो मासुका परिकार हुने गर्दछन् । रातो मासु र चिल्लो दुवै मुटुका बिरामीलाई हानिकारक हो ।
मुटुका बिरामी र उच्च रक्तचाप भएका बिरामीले यो समस्याबाट जोगिन रातो मासु अर्थात् खसी र राँगाको मासु नखाने, मदिरा सेवन नगर्ने, धुम्रपान नगर्ने, चिल्लो पदार्थ कम गर्नुपर्दछ,’ डा. श्रेष्ठले भन्छन्, ‘कुखुरा माछा पनि थोरै मात्रामा खाने, चिल्लो बढी भएको माछा मासु तथा अन्य खानेकुरा खाँदै नखाने, नुन धेरै हालिएको खानेकुरा खानुहुँदैन ।’
मुटुका बिरामीले एक दुई टुक्रा सेतो मासु र प्रशस्त मात्रामा हरियो सागसब्जी तथा फलफूल खानु नै सबैभन्दा उत्तम हुने उनले बताए ।
डा. श्रेष्ठका अनुसार बढी चिल्लो र मदिराका कारण मिर्गौला असन्तुलन हुन गई मिर्गौला फेलसमेत हुन सक्छ । त्यसकारण मिर्गौला रोग लागिसकेकाले चाडबाडका नाममा मासु र अत्यधिक चिल्लो छुनु नै हुँदैन । धेरै मदिरा सेवनका कारण मिर्गौला असन्तुलित हुन पुग्छ ।
बियरले शरीरको मेटाबोलिज्ममा असर गर्छ । बियर खाँदा शरीरमा पानीको मात्रा बढ्न जान्छ । त्यति नै मात्रामा शरीरमा बाहिर गएन भने शरीरमा पानीको मात्रा बढ्न गई मिर्गौलालाई असर गर्छ ।
मदिराजन्य पदार्थमध्ये बियर र वाइनमा अल्कोहलको मात्रा कम हुन्छ भने रम, जिन, भोड्का, ब्रान्डी, ह्विस्कीमा अल्कोहलको मात्रा बढी हुन्छ । रक्सी पेटमा पुगेपछि सोसिएर रगतमा मिसिन्छ र बग्दै शरीरको सबै भागमा पुग्छ । मधुमेहको औषधि सेवन गरिरहेका व्यक्तिले रक्सी सेवन गरेमा मिर्गौला फेल हुने सम्भावना हुने उनको भनाइ छ ।
चाडबाडका समय मधुमेह भएका बिरामीले चिनी र चिनीबाट बनेका परिकार खानुहुँदैन । यस्तै, यस्ता बिरामीले प्लास्टिक र टिनमा राखिएका अचार, ड्राइफुड, फलफूल, जंकफुड छुनैहुँदैन । बिरामीले मह, केक, पेय पदार्थ, हर्लिक्स, बोर्नभिटा, आइसक्रिम, जाम, जेली, सख्खर, तेल वा घिउमा तारेका खाना वा बोसोजन्य उत्पादन आदि खानुहँुदैन ।
धुम्रपान र मद्यपान त पटक्कै गर्नुहुँदैन । मधुमेहीलाई थोरै मात्रामा चामल, गहुँ, मकै, फापर, कोदो, जौ, चिउरा, भुजा , कर्नफ्लेक्स, चाउमिन, गेडागुडी (दाल, चना, बोडी, सिमी, भटमास, केराउ, मुसुरो, राजमा आदि) खान हुन्छ ।
त्यस्तै, माछा, मासु, अन्डा, फलफूल, वनस्पति तेल थोरै परिमाणमा खान मिल्छ तर स्वास्थ्यको ख्याल गरी निकै थोरै परिमाणमा मात्र यस्ता खाने कुरा खान डा. श्रेष्ठले बिरामीलाई आग्रह गरे ।
उनका अनुसार मधुमेहका रोगीले स्वस्थ मानिस सरह हरिया सागसब्जी, करेला, काउली, गोलभेंडा, स्कुस, घिरांैला, सलाद, साग, काँक्रो, सेतो मुला, बन्दा, रायो, कुरिलो, चम्सुर, पालुंगो, गाँजर, कागती आदि खान मिल्छ ।
मसलाजन्य पदार्थमा जिरा, मरिच, मेथी, बेसार, अदुवा, खुर्सानी, सुप, धनियाँ खान कुनै समस्याहुँदैन । यस्तै पेय पदार्थमा चिनी तथा घिउ नभएका चिया, कफी, सुप खान सकिन्छ ।
दसैंको समयमा खानामा ध्यान नदिँदा कलेजो बिग्रन सक्छ । विशेषगरी कलेजो मदिरा र बोसोयुक्त तथा चिल्लो खानाले बिग्रने सम्भावना हुन्छ ।
मानिसको रगतमा रहेको अल्कोहलको मात्रा जति बढ्दै जान्छ यसले दिमाग र स्नायु प्रणालीलाई त्यति नै नकारात्मक प्रभाव पनि पार्दै जान्छ । रक्सीलाई पचाउने काम कलेजोको हो ।
कलेजोमा रक्सी जम्मा हुँदै टुक्रिँदै जल्दै जान्छ, यसक्रममा प्रशस्त ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ । त्यो ऊर्जा खर्च नभएमा बोसोमा परिवर्तन भई कलेजो, रक्तनली र मुटुमा जम्मा हुन पुग्छ ।
रक्सीलाई पचाउन कलेजोले धेरै जोडतोडका साथ काम गर्नुपर्ने भएकाले कलेजो थाक्छ, त्यहाँ बोसो जम्मा हुँदै जान्छ । कलेजोमा बोसो बढ्दै गएपछि त्यसले कलेजो नष्ट हुँदै जान्छ अनि
‘लिभर सिरोसिस’ र कलेजोले काम गर्न छोड्छ । त्यसकारण दसैंको समयमा मदिरा र मासु खाँदा विशेष ध्यान दिन डा. श्रेष्ठ सुझाव दिन्छन् ।
Tags: के खानेके नखाने ?
गोरखामा ४९ हजार घरको पुनःनिर्माण
गोरखा । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको चार वर्ष पूरा हुँदा गोरखामा ७५ प्रतिशत निजी आवास पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखामा लाभग्राहीको सूचीमा परेकाम...
जनप्रतिनिधीले छोराछोरी बोर्डिङमा पढाएको भन्दै सामुदायिक विद्यालय अनिश्चिकालको लागि बन्द
गुल्मी । गुल्मीको रुरु गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालय अनिश्चित समयको लागि बन्द भएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाका भातृ संगठन अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का विद्यार्थीहरुले गाउँपालिकाका सबै...
गोरखा । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको चार वर्ष पू
विप्लव समूहलाई राजनीतिक मूलधार...
रुसी राष्ट्रपति पुटिन र उत्तर ...
राष्ट्रपति भण्डारीबाट ‘तासियान...
कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतको का...
वैज्ञानिक भन्छन् : नेपालमा फेरी आठ रेक्टरको भूकम्प… (28,018)
लोकसेवा तत्काल नखुल्ने, कर्मचारी समायोजनपछि बल्ल विज्ञापन (26,054)
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विभेदकारी रहेको लोकसेवाको ठहर (21,808)
१४ हजार पदमा लोकसेवा खुल्दै, खरिदारदेखि सहसचिवसम्म… (17,798)
विवाह लक्षित महाकुम्भ जुत्तामेला सुरु (17,509)
प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष
विप्लव समूहलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ : गृहमन्त्री
महिलामा हुने विभेदलाई व्यावहारिक रुपमा अन्त्य गरिनुपर्छ : मन्त्री बाँस्कोटा
नटवरलालले यसरी बेचेका थिए भारतको ताजमहल
एक जमाना थियो । शासन पनि देशमा ठूलाठालुहरुले गर्दथे । भारतमा पनि
आणविक अस्त्रको त्रास...
दुईपटक बेचिएको ऐफल टावर...
खेती अन्तरिक्ष लडाइँको...
हरिवंशले १० सहरमा दर्शक नचाए
काठमाडौं । वरिष्ठ हास्यव्यंग्य अभिनेता हरिवंशले मुलुकका १० वटा सह
प्रेम विवादबीच मलाइकाको बेहुली फोटो सुट
मुम्बई । अभिनेत्री मलाइका अरोराको विवाह अर्जुन कपुरसँग हुने चर्च